São Tomé iyo Príncipe waxay $ 10.7 milyan ka heleen Sanduuqa Horumarinta Afrika
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Sao Tome iyo Principe » São Tomé iyo Príncipe waxay $ 10.7 milyan ka heleen Sanduuqa Horumarinta Afrika
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Sao Tome iyo Principe • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Sanduuqa Horumarinta Afrika wuxuu fidiyaa $ 10.7 milyan oo deeq ah si loogu taageero SMEs xagga beeraha iyo dalxiiska São Tomé iyo Príncipe.
Mashruucan ayaa looga golleeyahay in lagu horumariyo jawiga ganacsiga iyadoo meesha laga saarayo caqabado gaar ah oo hortaagan kobaca ay hogaaminayaan waaxda gaarka loo leeyahay.
Mashruucu wuxuu kaloo xoojin doonaa awoodda iyo helitaanka suuqyada iyo amaahda shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah (SMEs) iyada oo loo marayo tababarka horumarinta farsamada iyo ganacsiga.
Dalku wuxuu leeyahay awood sare xagga beeraha, adeegyada, oo ay ku jiraan dalxiiska iyo dhaqaalaha buluugga ah, waaxyo matalaya in ka badan 70% dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha.
Guddiga Maamulayaasha Sanduuqa Horumarinta Afrika (ADF) oo lagu ansixiyay Arbacadii Abidjan, deeq dhan $ 10.7 milyan oo São Tomé iyo Príncipe loogu talagalay hirgelinta wajiga koowaad ee Hindisaha Zuntámon, oo ku jira qaab -dhismeedka Lusophone Compact.
Mashruucan ayaa looga golleeyahay in lagu horumariyo jawiga ganacsiga iyadoo meesha laga saarayo caqabado gaar ah oo hortaagan kobaca ay hogaaminayaan waaxda gaarka loo leeyahay. Mashruucu wuxuu kaloo xoojin doonaa awoodda iyo helitaanka suuqyada iyo amaahda shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah (SMEs) iyada oo loo marayo tababarka horumarinta farsamada iyo ganacsiga. Tani waxay aakhirka kordhin doontaa kaalintooda dhaqaalaha iyo shaqo abuurka waxayna dhisi doonaan dhaqaale adkaysi badan.
Ka sokow SMEs, mashruucu wuxuu ka faa'iideysan doonaa maalgashadayaasha iyo hay'adaha taageerada ganacsiga sida Wakaaladda Horumarinta Ganacsiga iyo Maalgashiga, ururada ganacsiga iyo ururada taageerada ganacsiga, hay'adaha maaliyadeed iyo Bangiga Dhexe ee São Tomé iyo Príncipe. Hirgelinta mashruuca ayaa horseedi doonta in la yareeyo tirada maalmaha si loo xalliyo khilaafaadka ganacsi oo ahaa 1,185 illaa 600 maalmood iyada oo la xoojinayo awoodda xarunta dhexdhexaadinta iyo nidaamka maxkamadda ganacsiga, iyo iyada oo la xoojinayo jawiga ganacsiga si loo kordhiyo tirada meheradaha diiwaangashan.
“Mashruucani wuxuu dhisi doonaa awoodda hay’adaha muhiimka ah ee Dawladda Sao Tome iyada oo la hagaajinayo jawiga ganacsiga ee horumarinta qaybaha gaarka loo leeyahay. Waxay kor u qaadeysaa oo dhiiri gelinaysaa habaynta dhaqaalaha aan rasmiga ahayn si loo abuuro shaqooyin badan oo ka sii wanaagsan, gaar ahaan haweenka iyo dhallinyarada xukuma qaybta aan rasmiga ahayn. ” ayay tiri Marwo Martha Phiri, Agaasimaha, Hantida Aadanaha, Horumarinta Dhallinyarada iyo Xirfadaha (AHHD).
Hindisaha Zuntámon wuxuu diiradda saari doonaa wax -ka -qabadkiisa badeecadaha ay haweenka iyo dhallinyaradu si firfircoon wax ugu biirinayaan, iyo sidoo kale badeecadaha dhoofinta oo leh awood kobac sare leh sida kookaha, qumbaha iyo wax -soo -saarka beeraha. Ahmiyadda la siinayo badeecadan iyo adeegyadan ayaa la jaanqaadaya dawladda São Tomé iyo Príncipe istiraatiijiyad dib-u-soo-kabashada dhaqaalaha kadib COVID-19, taas oo mudnaan siineysa taageerada ganacsiyada ay aafeeyeen iyo soo kabashada warshadaha muhiimka ah sida beeraha, kalluumeysiga, dalxiiska iyo soo dhoweynta.
“Ka dib markii lagu taageeray jawaabta COVID hawlgal taageero miisaaniyadeed taariikhi ah 2020, Bangigu hadda wuxuu safka hore kaga jiraa soo kabashada masiibada ka dib São Tomé iyo Príncipe oo leh qaab cusub oo ka jawaabaya caqabadaha gaarka ah ee soo food saaray waaxda gaarka loo leeyahay dhaqaalaha aan ciriiriga ahayn, ”ayuu yiri Mr. Toigo, Maamulaha Bangiga ee São Tomé iyo Príncipe.
Mashruucu wuxuu la jaan qaadayaa Shaqooyinka Baanka ee Istaraatiijiyadda Dhallinyarada ee Africa wuxuuna ka jawaabayaa ujeeddooyinka Heshiiska Lusophone isagoo kor u qaadaya horumarinta qaybaha gaarka loo leeyahay oo waara, isagoo gacan ka geysanaya Istaraatiijiyadda Horumarinta Waaxda Gaarka ah ee dalka 2015-2024.